Mai Dalloway, mutsoropodzi ane simba waVirginia Woolf | Zvazvino Zvinyorwa
Mai Dalloway naVirginia Woolf inomiririra chirevo chepamusoro cheBritish chenguva yepakati. Yakabudiswa muna 1925 uye yakaiswa mumazuva iwayo. Apo maronda ekubuda ropa akasiiwa neThe Great War aive achiri akavhurwa mumigwagwa uye mudzimba. Panguva iyoyo hapana mumwe mumuzinda weChirungu aifungidzira kutanga kweimwe kurwa nezvombo zvine chekuita nepasi rose.
Kunze kwezvinotyisa, nzanga yepamusoro yeLondon haina kunyatsoteerera chokwadi ichocho kunze kwenzvimbo dzayo dzeumbozha uye nyaradzo. Saka, mune zvinyorwa zveiri basa rine kutsoropodza kune simba nenzira isina basa yekuona nyika.
1 Mufananidzo wepashure pehondo London, "yakarungwa" ine nhoroondo yehupenyu
1.1 Rimwe zuva nyaya
2 Pfupiso yechirongwa
2.1 Chinangwa: chengetedza facade
2.2 Iyo ngano nezve kusachena kwehupenyu uye hushingi hwerufu
2.3 Basa rine hukama hwehukama hwakasimba
3 Maitiro eWoolf
3.1 Chitsauko chakasiyana
3.2 Bhuku umo pasina chinoitika?
4 Kuverenga kwakakosha
Mufananidzo wepashure pehondo London, "yakarungwa" ine nhoroondo yehupenyu
Virginia Woolf akawana zita rake pane runyorwa rwevanyori vepasirese. Icho chirevo chinosungirwa mukati me avant-garde uye Anglo-Saxon yazvino. Pakati pezvimwe zvinhu, akamira kunze kwekureruka kwake pakuzadza dzakawanda dzenyaya dzake dzakazara nezvinongedzo chaizvo nemavhesi nhetembo.
Mai Dalloway ndiko kwaive kusikwa kwakakosha kwebasa rake mutsamba. Vatsoropodzi vakatanga kumutora zvakakomba kuvonga yepakutanga manyorerwo, zvakaoma kutevedzera. Kune rimwe divi, chimwe chezvinhu zvinotsanangurwa zveiri basa, pamwe ne "nzira" dzemunyori waro: kutaura pamusoro pezvinhu zvakawanda, pasina (mukati menyaya) chero chinhu chichiitika.
Rimwe zuva nyaya
Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zvemavara kupokana kwayo, nekuti zvinoitika muzuva rimwe chete. Kunyangwe kusvetuka kwenguva kuri kuwanda mukukura kwayo, izvi zvinongoitika mukati mevanhu. Izvi zvinoratidza hunhu hwehunhu hwe Mai Dalloway uye yechimwe chinhu chine huremu hwakati wandei muhurukuro: hukama hwepedyo.
Kusiyana nemanyorerwo mazhinji neichi quirk, vaverengi havangowana chete iwo mafungiro eva protagonists nevanopikisana navo. Ose mavara anoratidzira mukati meiyo zano anonakidzwa nenguva yavo yekufungisisa. Ongororo "yekurarama" yekuti vanoona sei nyika uye zvavanotarisira kubva kune vamwe. Muzviitiko zvakawanda, kururamisa chikonzero chezviito zvavo.
"Zuva muHupenyu hwaMai Clarissa Dalloway" ichave, pasina mubvunzo, nzira iri nyore yekupfupisa zano rerungano urwu.. Pakati pezuva riri kutaurwa - pakati pekupisa kweLondon chirimo - uyu mukadzi ane mukana wekuwana echelons emasimba akasarudza kuita pati.
Chinangwa: chengetedza facade
Musangano wakarongwa naAmai Dalloway mutero kumurume wavo, nhengo yakamisikidzwa kwazvo yeConservative MP. Haasi kufara naye, saka, haana rudo naye. Asi iyo haisi iyo pfungwa, chakakosha chinhu chinzvimbo izvo zvinokupa iwe. Vose avo varipo pane varaidzo vanofungisisa pamisoro yakawanda; iyo rants, banal kana iripo, haisanganisiri chete vaenzi.
Wechokwadi counterweight anoshandiswa naSeptimus Warren Smith. Hondo yehondo iyo iyo "heroine" yenhoroondo isingazive, ane hupenyu uye kufa kwaanodzidza nekutenda kune zvakataurwa nevaya vaipinda mhemberero. Chaizvoizvo Septimus anochengeta yakawanda yeiyo autobiographical dhata iyo Woolf akaronga basa rake.
Iyo ngano nezve kusachena kwehupenyu uye hushingi hwerufu
Septimus Warren Smith aive manic kuora mwoyo, aifarira kuteerera kushiri, achiimba muchiGreek uye uyo akapedza hupenyu hwake nekuzvikanda nepahwindo. Haisi idiki diki; Panguva yekuburitswa, munyori akange atove ne kuzviuraya kutevera nzira imwe chete iyi.
Aya handiwo ega maitiro akaenzana pakati pemunyori neavatambi vake. Nhaurirano dzakatenderedza hukadzi uye bisexuality zvakare chikamu chechirongwa. Nenzira imwecheteyo, bhuku rinotaura nezvekusarudzika kwenzanga maererano nechirwere chepfungwa (uye "vanopenga" vanotongwa sei).
Basa rine hukama hwehukama hwakasimba
Iyo yakatanhamara pakati penzvimbo dzakasiyana siyana dzemisoro yakafukidzwa mu Mai Dalloway ndiko kushoropodzwa kunoratidzirwa kunzanga yeLondon. Chitarisiko, chinzvimbo munharaunda, simba, uye zvishuwo zvinomutsa. Mukati mekunyepedzera, aya mazano mainjini epasi.
Colonialism ndeimwe yemifungo yakatsanangurwa nemunyori nechikamu chayo chekuongorora (uye izvo zvinopedzisira zvarohwa). Zvisinei, kutora pfungwa dzakakura zvakadaro panguva iyo Woolf akashandisa chikumbiro "pakati pemitsara". Iko zviito uye kutaura kwevatambi kwakaruramiswa zvizere.
Harisi bhuku riri nyore. Inoshaya chero chinangwa chekunzvenga kana kupa vaverengi mhinduro isina kureruka. Pakati peavo vasingataure Chirungu, zvinoenderana neshanduro yavanowana, matambudziko ekutevera nyaya anogona kutonyanya. Mamiriro ezvinhu akaomesesa nekuda kwekushandisa zvisina kukodzera mamaki ekunyorwa nevamwe vashanduri vakavhiringidzika.
Beyond makoma uye nguva, Wool nemaune kutyora ne "kunofanira kuva." Iko kutarisisa kwerondedzero kunopfuura kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe, pasina "kutanga kuziviswa" kwekuchinjisa uku.. Dzimwe nguva nyaya "inochinja" kubva kune wekutanga kuenda kune wechitatu munhu kubva kune imwe ndima kuenda kune imwe zvakananga. Hapana hunyengeri kana hunyengeri.
Kuenderera mberi nekuomesa: kushomeka kwemiganhu kana zvikamu muzvinyorwa. Sezvinei, munyori - nemaune - kuendesa neyechinyakare chitsauko chimiro. Nekudaro, iwo anodarika anopfuura mazana matatu mapeji akafukidzwa nerondedzero, anoshaya "masisitimu ezvikamu".
Bhuku umo pasina chinoitika?
Kazhinji, rangano yenyaya yekunyepedzera inosundirwa nesimba rinoitwa neanopokana mukuteedzera chinangwa. Nenzira imwecheteyo, tambo yekukakavara inotakurwa nekupikisa kweanopikisana, uyo anoita nhamburiko yekukanganisa matanho kana manzwiro emunhu mukuru. Vhura Mai Dalloway hapana chimwe cheizvi.
Nyaya inofambira mberi nekuti nguva dzinopfuura. Uye vatambi vanoenda kune zvakapfuura vachiri "kurarama" akati wandei ezvinhu. Asi zvese zviri mukati memisoro yavo, mundangariro dzavo, muhana mavo. Nzvimbo dzekuchinja -Kunyange zvisiri pachena, zviripo - zvinogadziriswa kuburikidza nevemukati monologue. Iyi nzira yenyaya inonzi kuyerera kwekuziva kurondedzera.
Kuverenga Mai Dalloway kunotora nguva. Gadza nzvimbo mune ajenda yekufamba nemumvura ine gobvu pasina kukurumidza, uine moyo murefu, pasina zvinokanganisa. Iri ibhuku rakakosha kune wese munyori kana kune avo vanoshuvira kuzadzisa zita iri. Usati watanga mutambo uyu, gadzirira kudzoka pese pazvinenge zvakakodzera. Kurasika kuri nyore, asi kusvika kumagumo kwakakodzera.
Kune avo vanozvitsanangura se "vaverengi vane ruzivo" (kana nechero izwi rakafanana), inomiririra muyedzo wechokwadi wekunzwisisa. Iri zvakare ibhuku rinofanirwa kugamuchirwa pasina kumanikidzwa. Kana nguva yacho yakwana, zvinonakidzwa. Uye kana zvisina kudaro, pachagara paine rusununguko rwekuvenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Novela » Mai Dalloway